Michael Schumacher ayaa isbitaal ku yaal Paris: waa maxay doorka xaaskiisa Corinna? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Michael Schumacher ayaa isbitaal ku yaal Paris: waa maxay doorka xaaskiisa Corinna?
Michael Schumacher ayaa isbitaal ku yaal Paris: waa maxay doorka xaaskiisa Corinna?
Dhibane shilkii barafka wuxuu ka dhacay 2013, Michael Schumacher waa, ilaa Isniinta 9 Sebtember, Cisbitaal ka gadaal darbiyada cusbitaalka 'Georges Pompidou European Hospital', Magaalada Paris. Kooma muddo lix sano ah, Horyaalkii hore ee 'Worldula 1 Championship' ayaa lagu kalsoonaan karaa taageerada xaaskiisa, Corinna, oo ah meesha ugu horeysa ee maamulka maareynta caafimaadkeeda.
Xagaagii la soo dhaafay, tusaale ahaan, waxay ahayd iyadu qarash gareysay wadarta qiimaha (30 milyan oo yuuro) si ay u iibsato aqal qurux badan oo ku yaal Mallorca, gudaha Isbaanishka, sidaa darteed convalescence ninkeeda waxaa loo sameeyaa sida ugu fiican. Intaa waxaa dheer, Corinna hadda waxay maamushaa booqashooyinka Michael Schumacher. Dad yar ayaa loo ogol yahay inay soo booqdaan Schumacher. Xaaskiisa ayaa go’aamisay cidda loo oggol yahay inay arkaan "wuxuu sharxay Luca Badoer, oo ah saaxiibkii hore ee duuliyaha, maalmo ka hor.
Dad yar ayaa u tagi kara Michael Schumacher laakiin Jean Todt, tababarihii hore ee Ferrari, ayaa ka mid ah. Waxaan dhihi karaa oo keliya in qoyskiisu ay si wanaagsan isaga daryeelaan isaga oo uu wali sii dagaallamayodambe ayaa yidhi. Qaali ahow ninkeedaCorinna Schumacher, shaki la'aan, maahan wax aan ku jirin wareejinta xiddigii hore ee F1 ee caasimadda.
Corinna Schumacher iyo ninkeeda Michael Schumacher bishii Nofeembar 10 2012 ee Frankfurt
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/michael-schumacher-hospitalise-a-paris-quel-est-le-role-de-sa-femme-corinna-1021771
Dadka: Qoyska Gilbert Bécaud ee wadnaha masiibo: guriga gabadhiisa waa la gubay, qoysku wuxuu qaataa dabaqa
Soo saare "badbaaday" oo lagu xukumay Mexico dilkii xaaskiisa ayaa la siidaayay - The Mercury News - dadka